Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » I-Suite kangakanani kumaSandals Luxury Resorts
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Culinary • Izindaba zeCuracao Breaking • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Izimbadada Resorts Suites
Azikho ezinye izindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke ezithatha amakamelo azo nezindawo zokubhukuda ngokungathi sína njengamaSandals Resorts. Bacabange ngayo yonke into ukwenza indawo yokuhlala yezivakashi indawo yokuphumula yothando ephuphayo. Zizungezwe induduzo engayekethisi nokunethezeka okusezingeni lomhlaba, izivakashi zingaba nenkinga yokunquma ukuthi yini efana nepharadesi ngokwengeziwe, amakamelo okuzijabulisa namasudi noma amabhishi acwebile aseCaribbean.
Ema-Sandals Resorts, izivakashi zizongena kuma-suites amahle kakhulu futhi ahluke kakhulu eCaribbean.
Izindawo zokungcebeleka zezimbadada zaziwa ngokunikela ngezindawo ezinezinkanyezi eziyisihlanu ezikhethekile kunazo zonke emhlabeni.
Ngokwamagama omlingisi ongasekho nosomahlaya uJackie Gleason, owaziwa nangokuthi "Omkhulu," kwaSandals kulula kuzivakashi ukuthi, "Kulunge kangakanani lokhu!"
Amasudi angenakuqhathaniswa we Izimbadada zonke izindawo zokungcebeleka ezibandakanya unikele ngezindlela eziningi ezehlukile zokuzwa umhlaba wangasese wothando nokuphumula. Kusukela kuzindawo zokufihla i-bluff-top nezindawo zokubhukuda ezizimele zangasese kuya ku-suite exotic nxazonke noma ukubuyela emuva kokubhukuda, iqoqo elingakaze libonwe lilindelwe. Amanye ama-suites aze azibandakanye nelungelo lokuthi onakaliswe ngokuphelele ngumqaphi wobuqu oqeqeshwe yiGuild of Professional English Butlers ukuze izivakashi zikwazi ukufeza amaphupho azo endaweni yokungcebeleka eyenzelwe uthando.
ISANDALS LUXURY SUITE COLLECTION
Ezothando zenyukela ezindaweni eziphakeme kumaSkyPool Suites ethu. Vula iminyango yegumbi lokulala ukuze uveze ichibi lokungena elingapheli elihlangana ngaphandle komthungo nebanga elikude. Ukuthayipha kwe-Glass mosaic kulingisa isibhakabhaka, ngenkathi itshe elizungezile le-coral likubuyisela emuva emhlabeni. Noma suka egumbini lokuphumula ungene kuthafa lapho i-Tranquility Soaking Tub inikeza khona ukuphambukiswa kothando okumangazayo.
Ama-Suites Angaphezulu Kwamanzi
Amasudi wokuqala wamanzi aseCaribbean aguqula umdlalo ofaka konke. Zintweza ngaphezu kwezilwandle ezi-turquoise, lezi zindawo zokuhlala ezintsha zifaka phakathi ingilazi yokubuka ukubuka olwandle, iThubhu Lokuzola Elizinzileyo, isando samanzi esingaphezulu kwamabili, ichibi elizimele elingaphansi, kanye nensizakalo yomuntu uqobo.
Ngokuhlanganisa ukucwengwa kwangaphakathi nobukhazikhazi bangaphandle, lawa ma-suites ayisibonelo sokunethezeka kwezimbadada. Ama-Millionaire Suites eSandals St. Lucia asethwe engqungqutheleni yale ndawo, ngamunye eziqhayisa ngokubuka okungu-180 degree kokubukwa okuhle kakhulu kolwandle kulesi siqhingi futhi anedamu lokungena elingena zero elinempophoma ne-whirlpool. AmaMillionaire Suites eSandals Negril anikela ngokunethezeka okuyimfihlo okubandakanya nephathiyo yangasese enechibi.
Amabhishi eRondoval Suites
Yonqenqemeni lwamanzi, amaRondovals asogwini lolwandle agcwele indawo efana neZen ezungezwe ubuhle bemvelo obumangazayo. Izinyathelo nje ezisuka olwandle - nokunye okukuzo - la masudi kanokusho ayiziphephelo ezifanele zokugubha uthando olungunaphakade.
Ingadi Rondoval Suites
Iqhakambisa ukunethezeka nothando, iRondovals exotic, ama-suites-in-the-round, izivakashi ezizungezile zokunethezeka kwanamuhla nokuthula kwezindawo ezishisayo. Izinyathelo kude nolwandle, zingene ezingadini ezifihliwe, lezi zindawo zokukhosela zothando zinezingqimba ezingama-20 icalic, ama-patio asondelene engadini, amachibi azimele, izimpahla ze-mahogany, kanye nenkonzo yangasese yabaphathizitsha.
Yini engaba yinto ehlukile ukwedlula ukubhukuda uye endaweni enhle kakhulu yomuntu siqu? ISuites-up Suites of Sandals ihlotshiswe ngempahla ecebile nemininingwane emihle. Izinhlelo zesimanje, ezivulekile zomqondo zigeleza kalula zisuka kuvulandi yangasese ziye epulatifomu lokungena ngo-zero onqenqemeni lwechibi eligeleza ngobumnene.
Kepha Linda, Kuningi
Yebo, kunama-suites ajabulisayo kakhulu wokunelisa nokufeza izifiso zawo wonke umuntu, njenge-Romeo & Juliet Suites, ama-Private Plunge Pool Suites, ama-Two-Story Suites, i-Crystal Lagoon Suites, i-Villa Suites, ne-Love Nest Butler Suites. Cabanga nje abapheki bezitsha abaqeqeshwe kahle ababhekela izivakashi zonke izifiso kuma-suite aphezulu. Kungakhathalekile ukuthi kukhethwa muphi, izivakashi zizothola ukuthi “kuhle” kangakanani ukuhlala eSandals Resorts.
Ukunethezeka Okusha: I-Tasman Imemezela I-Australia Debut
I-Disney Cruise Line ivimbela izingane ezingagonyiwe
I-WHO ibingeke ivume umuthi wokugoma we-Russian COVID-19 ngaphezulu ...
Ama-90% amaphampu egesi ase-UK omile ngenxa yokuthengwa ukwethuka
Hlangana namaqhawe Ezokuvakasha e-World Travel Market London...
Iqembu leFraport: Abagibeli bayaqhubeka nokukhula...
Umuthi Omusha Wesizukulwane Esilandelayo we-COVID-19
I-Euractiv, Financial Times, Politico Europe itshele CHA ...
Izindiza ezisuka e-Almaty ziya eNew Delhi nge-Air Astana manje
I-India Yakha I-Drone Aviation Ephumelelayo Ukunika Amandla ...
I-Expo 2020: Izindiza ze-Emirates eziya eSeychelles
Izindawo Zokungcebeleka ZakwaSandal Manje Zibungaza Igalofu Ehamba Phambili Ne-Spa...
I-Neighbourhood Guides: Izinto eziyi-10 Ongase Ungazazi...
I-Etihad, i-Boeing, i-GE, i-Airbus ne-Rolls Royce entsha...